Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: Donations
Donations from Norway, Canada, Australia, Singapore, US, and labor cases
12-12-08 Donation from Norway
နော်ဝေနိုင်ငံရောက် ကိုမြင့်အေးနှင့် မထားရီ (ယခင်ဆေးခန်းဆရာမ)တို့ ကောက်ခံပေးပို့သော အလှူငွေ ရူးပီး ၄၅ဝဝ လက်ခံရရှိသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Yamuna Clinic received Krone 700 (INR 4,500) from Norway. Thanks for Ko Myint Aye and Ma Thari who collected the donation from:
Ko Aung Htun 200 Kr
Ko Aung Naing 100 Kr
Ko Jimmy 200 Kr
Ko Myint Aye 200 Kr
Total = 700 Kr
13-12-08 Yamuna Clinic received INR 4,000 from (former) 8888 Monastery Sayardaw U Pyinnyawara from Darwin, Australia. Thanks!
ယခင် နယူးဒေလီ ရှစ်လေးလုံးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးပညာဝရ (ဒါဝင်၊ သြစတေးလျ)ထံမှ အလှူငွေ ရူးပီး ၄ဝဝဝ တိတိ လက်ခံရရှိသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
18-12-08 Donors from Singapore = 15,777
• ကွယ်လွန်သူ အဖိုး အင်ယိ့ချင်း (Ng Yu Qing) ၂၆-၅-၁၉၇ဝ၊
• ကွယ်လွန်သူ အဖွား (Zhang Ming Sheng) ၂၃-၆-၁၉၇၉၊
• မိခင်ဖြစ်သူ အင်သရော်ဂယုတ် (Ng Teow Geok) ကွယ်လွန်ချိန် ၂၇-၆-၂ဝဝ၉ နံနက် ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ်၊
• ဖခင်ဖြစ်သူ ချွာဆွား (Chua Swa) ကွယ်လွန်ချိန် ၂၉-၁၂-၂ဝဝ၃ ညနေ ၇ နာရီ ၅၇ မိနစ်၊
တို့အား ရည်စူး၍ စင်္ကာပူရောက် သား-သမီး-မြေးတစုက ယမုန်နာဆေးခန်း သို့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅ဝဝ တိတိ ပေးပို့လှူဒါန်းလိုက်ပါသည်။ စေတနာရှင်များနှင့်တကွ အလှူငွေကောက်ခံပေးပို့သည့် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာစေတနာရှင် အမျိုးသမီးကြီး အားလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ အဖိုး-အဖွါး-မိဘများ “ကောင်းရာသုဂတိ” လားပါစေ။
Ko Ngwe Toe and Ma Hlaing (Labor case) = 1,000 (24-12-08)
Lian Kim and Ngai Ding (Labor case) = 650 (26-12-08)
U Phyu Win (Prospect Burma) = 1,000 (27-12-08)
27-12-2008 Professor Thann Naing, Chairperson of Burmese Community Welfare Group from Sidney, Australia donated INR 2,000. Many thanks!
သြစတေးလျ မှ မြန်မာလူမျိုးစုလူမှုရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းနိုင်မှ ဆေးခန်းအတွက် ရူးပီး ၂ဝဝဝ လှူဒါန်းသဖြင့် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
25-1-2009 Yamuna Clinic received donation $100 from Dr. Win Naing and Dr. Khin Win Nwe from London.
လန်ဒန်မြို့မှ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်နှင့် ဒေါက်တာခင်ဝင်းနွယ်တို့မှ ဆေးခန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဝ တိတိ လှူဒါန်းသည်။
9-2-09 Ma Khin Moe Swe (former clinic assistant) collected Canadian $ 320 from Burmese (Chin) community in Canada and donated to Yamuna Clinic:
1. Pu Hau Thuan = C$ 75
2. Pu Ni Lian Sum = C$ 5
3. Pu San Mang = C$ 5
4. Pu Kap Khuah = C$ 10
5. Pi Tin Thuai = C$ 5
6. Pu Thawng Za Khen = C$ 5
7. Pu Biak Vum = C$ 5
8. Pu Sawi Thuam = C$ 5
9. Pu Thawm Nei Mang = C$ 20
10. Pu Za Kung Lal = C$10
11. Miss Khun Siang Mawi = C$15
12. Miss Aa Kyi = C$10
13. Zin Mar Hlaing = C$ 50
14. Khin Moe Swe = C$ 100
Total = C$ 320
Sending fee = C$ 17
Amount Sent = C$ 303
Money Exchange = 1 C$ = Rs 39.19
Indian Rupee = Rs 11, 875.44
27-1-09 The clinic received USD 1,200 (INR 58,116) from Susan, BRC-USA
Case # 64 Khawl Nu and Biak Za Mung = 1,000 INR
Case # 65 Ciin San Deih and Suan Te = 500 INR
Case # 66 Far Hnaing and Ceu Uk = 500 INR